फिचर समाचार | Naya Yougbodh National Daily | Page5Free songs
Home / फिचर समाचार (page 5)
बढ्दो अपराध : शनिवार अपराध धेरै
निमुसंगम घर्ती घोराही। बंगलाचुली गाउ“पालिकाको गाडीमा गतशनिवार राति अज्ञात समूहले आगजनी ग¥यो। घटना भएको एक सातासम्म कसले आगो लगायो भन्ने आधिकारिक खुल्न सकेको छैन भने कसैले जिम्मा पनि लिएको छैन। गाडी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। घटना मध्यरातमा भएको थियो। घटना ...
‘हराउदै थारु भाषा र संस्कृति’
घोराही (युस)– घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुुख नरुलाल चौधरीले थारु भाषा, संस्कृति, चालचलनहरु हराउ“दै गइरहेको बताउनुुभएको छ। भाषाको पुुस्तान्तरण र संस्कृतिको प्रर्वद्धन हुुन नसक्दा थारु भाषा र संस्कृति विस्तारै हराउ“दै जान थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुुभयो। थारु पत्रकार संघको चौथो अधिवशेनका अवसरमा बोल्दै ...
सुरक्षालाई आर्थिक असुरक्षा
कुमार श्रेष्ठ बाके बर्दियाको एउटा थारु गाउ“ सटरिया। बा“सगढी बजारछेउको यो सानो थारुगाउ“मा फूटबलको क्रेज पहिलेदेखि नै थियो। त्यसमा अझ एउटै वडामा पर्ने दमौलीले एकताका क्लवस्तरीय फूटबलमा ‘तहल्का’ मच्चाउ“दा सटरिया पछि–पछि नै दौडिन्थ्यो। हो, यही थारुगाउ“बाट एक प्रतिभा निस्किएकी छन्, ...
स्मार्ट कृषि गाउँको अनुगमन
युगबोध समाचारदाता घोराही । पाच नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललगायत सरोकारवालाहरुले शान्तिनगर गाउपालिका–७ बुढाडावर–दुबीचौरमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउ“ कार्यक्रमको अनुगमन गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको आयोजनामा दुबीचौरस्थित स्मार्ट कृषि गाउ“मा रहेका कृषि गतिविधिको शनिवार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको हो। ...
घोराहीका नौवटा वडाले मात्रै प्रगति विवरण बुझाए
5 days ago	0 48 Views
गोविन्द खड्का घोराही गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण बुझाउने घोराही उपमहानगरपालिकामा नौवटा वडा मात्रै रहेका छन्। अरु नौवटा वडाको कोलुम खाली राखिएको छ भने वडा नम्बर १९ को नामै उल्लेख नभएको आव २०७५÷०७६ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यसरी ...
प्रतिष्ठान र सरकारी डाक्टरबीच किचलो
6 days ago	0 39 Views
• सरकारी डाक्टर भन्छन– सरकारी छोड्दैनौं • प्रतिष्ठान भन्छ– प्रतिष्ठानकै नियम मान्नुपर्छ गिरिराज नेपाली घोराही । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको वर्षदिन करिव बित्दैछ। धेरै समय भएको छैन। प्रतिष्ठानले अझै पर्याप्त चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अझै चिकित्सकहरुको अभाव छ। जहा ...
खहरेबाट जोगिन रातभर जाग्राम
दशरथ घिमिरे देउखुरी। खहरे खोला। अहिले शान्त छ। तर वर्षामा बौरिन्छ। सधैं सताउछ। घर डुबानमा पर्छ। पानी पर्दा रातभर निद्रा पर्दैन। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ डागी गाउ र नैनवार गाउको सिमानामा बसोवास गर्ने नागरिक चिन्तामा डुबेका छन्। चुरे ...
अटो रिक्सा चलाएर आम्दानी गर्दै युवा
हिमाल शर्मा सल्यान । सल्यानका युवाहरु अटो ब्यवसायमा आकर्षित भएका छन्। अटो सिक्साबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि यहाका युवा अटो व्यवसायमा लागेको बताएका छन्। अटो रिक्सा सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनेको उनीहरुको भनाइ छ। झन्डै ६ लाखको लागतमा खरीद गरिएको ...
जनसहभागितामै गुणस्तरीय विकास : नगर प्रमुख चौधरी
युगबोध समाचारदाता घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले जनताको सहयोग र सहभागिताबाटै दिगो र गुणस्तरीय विकास हुने बताउनुभएको छ। वडा नम्बर १७ ले शुक्रवार हरिद्वारमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नगर प्रमुख चौधरीले हरेक योजनालाई आफ्नो ...
Page5of 539« First...«34567»102030...Last »